ပြည်ပ အလုပ်အကိုင် ~ The ICT.com.mm Blog
ပြည်ပ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေလိုသူတွေအတွက် အော်ဇီ၊ တရုတ် (တိုင်ပေ)၊ ဟောင်ကောင်၊ အိနိ္ဒယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ကိုရီးယား၊ မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်၀မ်၊ ထိုင်း၊ အမေရိကားစတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ အလုပ်မျိုးစုံ ရှာဖွေ လျောက်ထားနိုင်မယ့် ၀က်ဘ်ဆိုက်ပါ။ ယင်း၀က်ဘ် ဆိုက်မှာ အလုပ် လုပ်ကိုင်ချင်သူတွေအတွက် အသက်မွေး၀မ်းကျောင်း ဆိုင်ရာ လေ့လာစရာနဲ့ ရွေးချယ်စရာ အကြံပေးချက်တွေ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းသတင်းတွေ ရေးသား တင်ပြထားပြီး အွန်လိုင်းကနေ တိုက်ရိုက် အလုပ် လျောက်မယ့်သူတွေအနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့ အချက် အလက်တွေ ဖြည့်ကာ Register လုပ်ထားရပါမယ်။ လုပ်ကိုင်မယ့် ပညာရပ်အလိုက် Entry Level, Middle Level, Senior Level, Top Level အလိုက် ခွဲခြား တင်ပြထားပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုရင် လက်ရှိ လစ်လပ်နေတဲ့ တစ်သောင်းရှစ်ထောင်ကျော်ရှိ အလုပ်အကိုင် နေရာ မျိုးစုံ ရှာဖွေ လျောက်ထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Older ခေတ်တစ်ခေတ်ထဲက ပုံရိပ်
2 thoughts on “ပြည်ပ အလုပ်အကိုင်”
Layeik Nein says:
404 no page found. @[email protected]???????
/reviews/website/%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%95-%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%84%E1%80%B9/ it’s working. click on ျပည္ပအလုပ္အကိုင္